Heerka warshadaha xeedho ee Shiinaha ayaa ku dhawaaqay in taleefannada gacanta aysan u baahnaan doonin inay beddelaan xeedho
Heerka warshadaha xeedho ee Shiinaha ayaa ku dhawaaqay in taleefannada gacanta aysan u baahnaan doonin inay beddelaan xeedhoyaasha wararka Dongfang.com 19 -ka Diseembar: haddii aad beddesho nooc ka duwan taleefoonka gacanta, xeedhaha taleefanka gacanta ee asalka ah badiyaa ma xuma. Sababtoo ah tilmaamayaasha farsamo ee kala duwan iyo ...
Xalka xeedho taleefanka gacanta oo gubanaya
Miyay fiican tahay in xeedhada la geliyo meesha iyada oo aan lahayn hawo ama timo kulul. Haddaba, maxaa xal u ah dhibaatada gubashada taleefanka gacanta? 1. Adeegso xeedhaha asalka ah: Markaad ku dallacayso taleefanka gacanta, waa inaad isticmaashaa xeedhaha asalka ah, kaas oo hubin kara wax soo saarka deggan ee hadda jira ...
Iibinta taleefoonnada gacanta oo aan lahayn xeedho, heer degdeg ah oo lagu dallaco ayaa kala duwan, ma degdeg baa in la yareeyo qoondaynta ilaalinta deegaanka?
Apple ayaa lagu ganaaxay $ 1.9 milyan Bishii Oktoobar 2020, Apple waxay soo saartay taxaneheeda cusub ee iPhone 12. Mid ka mid ah astaamaha afarta moodel ee cusub ayaa ah inaysan mar dambe la imaanin saxanno iyo dhegaha -dhegaha. Sharaxaada Apple ayaa ah tan iyo markii lahaanshaha caalamiga ah ee aaladaha sida adaprada korontada ay gaartay ...